Kedu otu esi azụta ntanetị n'ịntanetị? | ECommerce ozi ọma
Kedu otu esi azụta ntanetị n'ịntanetị?
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Nche
Otu ebumnuche kachasị amasị maka akụkụ dị mma nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ bụ ime ka ịzụta ha n'ịntanetị n'enweghị nsogbu. Ọ bụghị n'efu, ị nwere ike na-enwe ọtụtụ ihe ize ndụ nke ahụ ga-abụ ihe ọzọ ụdị nyocha na ọmụmụ ihe na isiokwu ndị ọzọ. Maka na ihe mbu ị kwesịrị iche n’echiche site ugbua gawa bụ na ọ bụ ego nke aka gị nọ n’ụdị azụmahịa a.
Buyzụta n'ịntanetị n'enweghị nsogbu, ị gaghị enwe ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ bụghị ịmebe a usoro nke aka nke ị ga - ezere ọnọdụ ndị a nke ndị ọrụ chọrọ obere. N'ezie, ọ bụ otu n'ime isi ihe kpatara na ndị a anaghị edozi ihe ha zụtara site na ọwa ahịa teknụzụ a. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ iji jiri nlezianya na nchebe rụọ ọrụ nke ukwuu na usoro anyị ga-eji site ugbu a gaa n'ihu.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, anyị enweghị ike ichefu na atụmatụ a iji nye nchekwa na ọrụ ntanetị ga-adabere na omume ndị egosila na ọ dị irè site na mmalite. N'aka nke ozo, anyi aghaghi iju onwe anyi site ugbua gawa ma anyi maara n'ezie ka esi azuta n'enweghị nsogbu na ntanetị. Ka ewere zere ọnọdụ ihere ọ bụla Maka ọdịmma gị, anyị ga-ewetara gị ọtụtụ atụmatụ nke ga-emechu gị ihu.
1 Zụta n'ịntanetị: jiri njikọ dị nchebe
2 Nwere ihe ọmụma ka mma
3 Chịkọta data gbasara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
4 Kpachara anya site na ngwaọrụ teknụzụ
5 Nyochaa mmegharị kaadị kredit gị
6 Nye data nkeonwe n’enweghị nsogbu
7 Nyochaa usoro nloghachi
8 Ọ bụghị ụlọ ahịa niile dị n'ịntanetị ka ha bụ otu
Zụta n'ịntanetị: jiri njikọ dị nchebe
Na mbu, anyi aghaghi ighota na obu ezie na odi nma ma dikwa mfe ichoghari ma zuta ihe jikotara ya na ntaneti nke ulo ahia, ulo ahia ma obu ulo ahia, odi ala karie eziokwu bu na netwoki ndia adighi enwe nchebe. Ọ bụrụ na ị ga-ebufe ozi nkeonwe dị mkpa ma ọ bụ kwụọ ụgwọ na usoro ịntanetị, ọ ga-abụ ihe na-achọsi ike na site ugbu a gaa n'ihu ị na-arụ ọrụ a site na netwọk echekwara. Will ga - ezere ụjọ nke oge ụfọdụ nwere ike imetụta ego gị ma ọ bụ nke ezinụlọ gị.
N'aka nke ọzọ, ị gaghị echefu na ndụmọdụ a dị mfe iji mezuo nwere ike ịmịpụta ndị ọzọ mgbakwunye uru. Dịka ọmụmaatụ, eziokwu ahụ bụ ụghalaahịa nke na-enye mmesi obi ike, ọ bụghị naanị na ịzụrụ, kamakwa n'ahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe ha. Yabụ n'ụzọ dị otu a, ha nwere ike mejupụta arụmọrụ ndị a yana nkwa niile enwere ike. E wezụga ọdịdị nke usoro azụmahịa ha ma ọ bụ njirimara nke ụlọ ọrụ dijitalụ ndị a.
Nwere ihe ọmụma ka mma
Otu igodo iji zute ihe mgbaru ọsọ a nke ndị ọrụ chọrọ bụ ịkwadebe onwe ha karịa karịa tupu ịzụta ihe n'ịntanetị. N'echiche a, otu n'ime igodo bụ na ọ dị mkpa ịjụ banyere ụlọ ahịa ahụ na engines ọchụchọ, netwọkụ mmekọrịta na ọgbakọ. Lele echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ nwere banyere ya nwere ike inye ọtụtụ ozi. Ya mere na na njedebe enweghi ụdị ọ bụla gbasara ọrụ a rụrụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa nke njirimara ndị a.
Ndụmọdụ bara uru iji mezuo site ugbu a gaa n'eziokwu na ị na-ahọrọ ngalaba ndị nwere ihe mkpuchi na weebụsaịtị ha. Enwere otutu ma odi kwa mfe ichoputa ha ka ahia wee nwee udo nke uche. Ọ bụghị n'efu, n'ezie ọ ga-aba uru iwepụta oge iji rụọ ọrụ a n'ihi na na njedebe nsonaazụ ga-eju afọ maka ọdịmma onwe anyị. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ nke ndị ọrụ ntanetị niile na-achọ.
Ya mere, anyị ga-achọ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị onye adreesị ha malite na HTTPS na gosi na a gbachiekwa na adreesị mmanya. Nke a na-achota na ozi a na-ebute site na ezoro ezo.
Chịkọta data gbasara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Otu igodo kachasị mkpa na ngalaba a bi na eziokwu ahụ bụ na a ga-enyocha ihe ọmụma site na ụlọ ahịa n'ịntanetị n'oge niile: onye ha bụ, ebe ha nwere ụlọ ọrụ ego ha, ihe data ha na-anakọta n'aka ndị ọrụ na maka ebumnuche, ụdị nke ịkwụ ụgwọ ha na-ahapụ, mbupu na nloghachi iwu.
Ọ bụ usoro ọzọ anyị kwesịrị mezue site ugbu a gaa n'ihu ebe anyị nwere ike nyekwuo nkwa na nzụta nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu nke ụlọ ọrụ dijitalụ. Ọ bụ ezie na akụkụ a nke usoro ahụ nwere ike ọ gaghị adị ntakịrị karịa nke ndị ọzọ. Mana na njedebe anyị ga-enweta ihe nrite na ụzọ ịzụta site na nchekwa karịa karịa ka ọ dị na mbụ. Maka na anyị ga-enweta ozi anyị chọrọ n'aka ụlọ ọrụ anyị chọrọ ịkpọtụrụ site n'echiche nke azụmahịa.
Kpachara anya site na ngwaọrụ teknụzụ
N'aka nke ọzọ, a na-atụ aro ya nke ọma n'oge ọ bụla anyị nwere arụnyere antivirus iwepu nje nwere ike ịnakọta ozi nkeonwe na nke ụlọ akụ na ngwa ahụ. Ọzọkwa, software arụnyere na ngwaọrụ ga-ruo ụbọchị. Ọ bụ usoro dị irè ka anyị wee nwee ike ịme ma ọ bụ mezue ịzụrụ ihe na ntanetị oge niile.
Ọbụghị naanị na kọmputa nkeonwe, mana site na ngwaọrụ ọ bụla nke teknụzụ. Site na ekwentị mkpanaaka, mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya. Ebe ihe ọ bụla ileghara na nche gị nwere ike imebi ịzụta nke njirimara ndị a. Ihe ngwọta a nwere ike ịnwe ego ego, mana n'eziokwu ọ bara uru na-ewere ya n'ihi oke nchekwa ọ na-enye anyị n'ụdị azụmahịa a. Ọ dịkarịa ala dị ka onyinye sitere n'aka ndị ọrụ n'onwe ha n'ịchọ ndị ọzọ na-enwe ike iji data wayo nweta data anyị.
Nyochaa mmegharị kaadị kredit gị
Gaghị enwe ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịzụrụ ọtụtụ ihe na ntanetị karịa ịlele na ebubo niile dị na akaụntụ gị mara ma na ị na - achịkwa ha. Ga-elebara anya nke ọ bụla enyo enyo na akaụntụ gị ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ị gaghị enwe ụzọ ọzọ ọzọ karịa ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ kredit gị ngwa ngwa ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme gị aghụghọ ma ọ bụ rụọ ọrụ ọjọọ.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, obi abụọ adịghị ya na ọwa dijitalụ na-adịkarị mfe ịzụlite ụdị aghụghọ a. Ya mere, ị kwesịrị ịmụrụ anya karịchaa tupu ọnọdụ ndị a nwere ike ịpụta n'oge ọ bụla. Beingbụ otu n'ime ihe ndị kachasị emetụta ma ịzụrụ ihe n'ịntanetị dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. N'ihe usoro nyocha ndi ozo.
Nye data nkeonwe n’enweghị nsogbu
Otu ihe egwu kachasị dị na arụmọrụ n'ịntanetị na-enweta site n'eziokwu na ị nwere ike ịnye data gị na ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha ga-eji maka ebumnuche ndị ọzọ. N'echiche a, ị ga-abụ ndị ọzọ kpachara anya banyere data nkeonwe ma ọ bụ ndị ọkachamara na-ajụ gị (mobile, aha ndị ikwu ma ọ bụ ebe ọmụmụ). Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka ị na-eji ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ na-enyere gị aka izere data ohi, karịsịa ma ọ bụrụ na kọmputa gị na-oria a virus.
Na-eduzi arụmọrụ azụmahịa site na gburugburu nchekwa na ntụkwasị obi. A bara uru nke ukwuu bụ na ị naghị eji kọmputa ọha na eze nwere ike ịnwekwu nsogbu maka ụdị omume a obere ndị ọrụ chọrọ. N'otu aka ahụ, akụrụngwa kọmputa ọ bụla dị ugbu a na-arụ ọrụ nke ọma ka ọnọdụ adịghị mma nke ukwuu wee ghara ịpụta maka ndị ọrụ niile na usoro a.
Nyochaa usoro nloghachi
Otu ihe egwu kachasị n'ịzụta ntanetị sitere na nloghachi nke ngwaahịa ma ọ bụ ihe ndị ahịa zụtara. Nke a bụ otu akụkụ nke ịrụ ụka adịghị ya na ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ ebe ị ga-azụta. Ha ga-enyerịrị gị mmesi obi ike niile na ọrụ a ga - eme dịka ọdịmma ịchọrọ ka a sọpụrụ ha. Na mgbakwunye, enweghị ike ichefu na ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị ga-enwerịrị nke ha iwu nzuzo na ebe putara ihe na emelitere ya.
O bu otutu mgbe na ihe omuma nke ikpeazu a abughi ihe ochie ma ya abaghi ​​uru gi. Ọ bụ data ọzọ ị kwesịrị ile anya site ugbu a gawa. N'ihi na ihe nọ n'ihe ize ndụ abụghị naanị ngwaahịa a zụtara, mana ego emere na mmegharị ndị a na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dijitalụ. E kwuwerị, ịghara imezu ihe a chọrọ pụrụ ifu gị ihe dị ukwuu.
Ọ bụghị ụlọ ahịa niile dị n'ịntanetị ka ha bụ otu
N'aka nke ọzọ, ị ga-amarịrị na azụmaahịa ndị a niile bụ otu, ya mere ị kwesịrị ị na-ahọrọ ndị ị họọrọ. Ya mere na na ọgwụgwụ ị na-ahọrọ onye na-enye gị ọzọ nche na di na ịzụrụ. Site na ngalaba ndị gara aga nke anyị kpughere gị, ị ga-enwe ike iru ebumnuche ndị a chọrọ. Na kachasị ihe niile n'ihi na ọ ga-aba ezigbo uru iji mezuo ha n'ihi na na njedebe nke ụbọchị ọ bụ ego gị na ị na-agba chaa chaa n'ụdị ọrụ azụmahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu otu esi azụta ntanetị n'ịntanetị?
Etu esi eji nyocha ndị ahịa iji mepụta ahịa karịa na eCommerce?
Atụmatụ 9 iji bulie ahịa na eCommerce